Ry GV, ny vaovaon’ny iSummit · Global Voices teny Malagasy
Ry GV, ny vaovaon'ny iSummit
Voadika ny 18 Oktobra 2018 18:47 GMT
(Marihina fa tamin'ny 15 Jona 2007 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Efa herintaona izay no nihaonantsika (2006) tany Rio de Janeiro, Brezila, ary tsy nitombo fotsiny tamin'ny isa ny vondrom-piarahamonina iCommons fa tamin'ny fahasarotany sy ny maha-zava-dehibe azy ihany koa ho toy ny tambajotran'ny olona miara-miasa mba hananganana vondrom-piarahamonin'ny fahafahana – mba hamoronana , mba ho ampiasaina, mba hizarana ary mba hifanakalozan-kevitra momba ny hoavin'ny hetsika.
Tao Dubrovnik ny toerana, tanàndehibe tsara tarehy any Kroasia, ary nanomboka tamin'ny 10:00 maraina ny hetsika. Afaka narahana tao amin'ny Second Life ny hetsika ary afaka nanontany ny tsirairay izay novalian'ireo mpandahateny mivantana. Nisy sehatra efatra indray niaraka tamin'izany, 1. Famokarana manokana: Fitsipika ara-dalàna sy ara-pandrafetana: Ahoana no ahafahan'ny olona mizara ny sehatra iraisana (commons) manerantany?, 2. Famokarana manokana: Fepetra ara-tsosialy, ara-teknolojia ary ara-toekarena, 3. Fanabeazana misokatra ary 4. Atrikasam-pampiharana.
Ny olo-malaza tahaka an'i Larry Lessig, Jimmy Wales, Jonathan Zittrain ary Yohai Benkler no mpandahateny tao amin'ny Fotoan-dehibe.
Ny tetikasa goavana toy ny Jamendo, Magnatune, Loftwork ary Starwreck Studios dia efa niresaka momba ireo maodeliny tamin'ireo mpanatrika ny iSummiters, izay mampiasa ny Lisansa Creative Common avokoa. Olona maro manerana izao tontolo izao no nivory niaraka mandrapaha-tapitry ny fivoriana ny Alahady ary nizara ny fomba fijeriny sy ny traikefany, ary avy eo nampihatra izany indray tany amin'ny toerana misy azy ireo tamin'ny famoronana ireo safidy hafa amin'ny lalàna momba ny zon'ny fizakamanana.